Maalinta: Al-Masad & Al-Xadiid iyo Masiixa - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Maalinta: Al-Masad & Al-Xadiid iyo Masiixa
Surah Al-Masad (Surah 111-Palm Fiber) waxay ka digaysaa Xukunka Dabka maalinta ugu dambaysa.
Waxaa khasaaray Gacmihii Abuulahab, halaagmayna.Waxna uma tarin Xoolihiisii iyo wuxuu kasbadayna.Wuxuuna gali Naar Olal leh.Haweenaydiisii Qoryaha xambaari jirtayna (waxay gali Naar).Luqunteedana waxaa la yeeli Xadhig Liif ah.
Suuradda Al-Masad waxay ka digaysaa inaan halaagi karno. Xitaa kuwa nagu dhow, sida xaasaskeena, ayaa iyaguna wajahaya hanjabaadda xukunka maalinta ugu dambeysa ee Qiyaame.
Haddaba maxaan samayn karnaa si aan ugu diyaar garoobno ​​imtixaanka Ilaah oo og dhammaan sirahayaga ceebta ah
Suuradda Al-Xadiid (Surah 57-Birta) waxay noo sheegaysaa inuu soo diray Calaamado si ay nooga hoggaamiyaan mugdiga qarsoodiyadeena ceebta ah oo nuurka u soo mara.
Suuradda al-Xadiid 57: 9
Laakiin waxaa nalooga digay in kuwa ku noolaa Mugdiga ay maalintaas si aad ah u raadin doonaan Iftiin.
waa Maalinta Munaafiqiintu Rag iyo Haweenba ay ku dhihi kuwa xaqa rumeeyay na suga aan ka Dhuxul qaadanno Nuurkiinnee, waxaana lagu dhihi ku noqda gadaashiinna, waydiistana Nuur, markaasaa layeelaa dhexdooda Darbi xaggiisa gudahana Naxariis tahay, xaggiisa dibaddana Caddibaad tahay.Way u dhawaaqi Mu’miiniinta iyagoo leh miyannaan idinla jirin, Mu’miniintuna waxa ku dhihi haa (waad nala jirteen) laakiin waxaad balayseen Naftiinna, xumaanna waad la sugteen (Nabiga Iyo Mu’miniinta), waadna shakideen waxaana idinku kadisay yididiilo (been ah) Inta amarka Eebe ka yimaaddo (Geerida) waxaana Eebe idinku kadsiiyay Kadiye (Shaydaan).
Suuradda al-Xadiid 57: 13-14
Ka warran haddii aanaan ku noolaan jirin si aan u helno Iftiin maalintaas? Rajo ma noo haysaa?
Ciise ayaa u yimid inuu na caawiyo maalintaas. Wuxuu si cad ugu hadlay inuu Isagu yahay Iftiinka kuwa naga mid ah ee ku jira mugdiga ceebta ah ee loo baahan doono Maalinta Qiyaame.
Yooxanaa 8: 12-30
Ciise Masiix wuxuu ku andacooday awood weyn inuu yahay ‘Iftiinka Adduunka’, markii la murmayna wuxuu tixraacay ‘Sharciga’. Kani waa Tawreedkii Nabi Muuse ee sii sheegay imaatinkiisa iyo awoodiisa. Waxaa ku xigay Zabur iyo nebiyadii ku xigay oo sii saadaaliyay faahfaahinta imaatinkiisa si aan u ogaanno inuu leeyahay awoodda uu sheeganayo. Waa maxay ‘Wiilka Aadanahu’ iyo muxuu Ciise al Masih ula jeeday ‘markaad kor u qaadday Wiilka Aadanaha’? Maxay ka dhigan tahay inaad haysato ‘nuurka Nolosha’? Waxaan halkaan ku eegnaa. Maanta sidaas yeelo, maxaa yeelay maalinta Qiyaame waa goor dambe in la bilaabo fiirinta markaa, sida al-Xadiid ka digay
Maanta (Qiyaamada) laydin kama aqbalo is furasho idinka iyo kuwa Gaaloobay midna, Hoygiinnuna waa Nar waadna mudataan, meel loo hoydana iyadaa u xun.()
Sidaas ayuu Ciise Masiix ku soo gabagabeeyay waxbaristiisa munaasabadan.
Yooxanaa 8: 31-59
Tags:injiilka Yooxanaamaalinta qiyaamahanuurka aduunkasuurada 111suurada 57suurada al masad.suurada al xadiid